PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-03-11 - EZENKOLO:
Ilanga langeSonto - 2018-03-11 - Izindaba -
USENGUMFUNDISI ngokusemthethweni emuva kokugcotshwa lowo oke waba ngumsakazi kwivuma FM nedivine Touch Radio, untombikayise Makhaye obedume ngelikasister K, kubalaleli bakhe.
Usister K ugcotshwe ngusihlalo wesifunda idurban Apostolic Faith Mission Network, umfu Tyrone Goliath, emlazi, ngesonto, emcimbini obuhanjelwe yinqwaba yabantu.
Igumbi lokufundela ophikweni lwenyuvesi izululand, emlazi, belinyinyitheka ngesikhathi efungiswa phambi kwebandla aliholayo, iplace of Discipleship Assembly, kukhona nebhodi esebenza ngaphansi kwakhe.
Ngaphambi kokufungiswa kukaSister K, umfu Goliath ufunde izwi elitholakala encwadini kajohane isahluko sesithupha, okuyindaba lapho inkosi ujesu yenza khona isimangaliso sokuqala, ithatha izinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili yakwandisa kwadla izihlwele zabantu ababebalelwa ezinkulungwaneni ezinhlanu.
Ingqikithi yentshumayelo yakhe ibithi: “ngabe uphetheni emgodleni wakho na?”
Uthe ngesikhathi kunenkinga yokuthi izihlwele zizokuthathaphi ukudla, omunye wabafundi walunguza emgodleni womfana wabona izinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili wabikela inkosi ujesu, kwagcina kusizakale izindimbane zabantu.
Utshele upastor Sister K ukuthi naye akaphathe ukudla, okuyizwi likankulunkulu, azokondla ngakho izihlwele ezizoza kuye zilambile.
Uqhubeke wathi kuzofanele azi (upastor Sister K) ukuthi akasiye umphathi kodwa uyisisebenzi sabantu, uyisithunywa esithunywe ngunkulunkulu.
“Kuhle uhambe uqonde phambi kwebandla ukuze nalo liqonde. Hamba ngemigomo yezwi likaNkulunkulu, ulandele ibhayibheli, ungasho okusuka kuwe Sister K,” kusho umfu Goliath.
Ebhekise ebandleni, uthe inki- nga yamakholwa amaningi wukuba nezimfihlo, wathi lokho akukuhle. Uthe ibandla kumele limeseke umholi walo, limazi ukuthi naye wedlulile ezinkingeni, unezibazi kepha unkulunkulu umemukela enjalo.
Ube esemfungisa izifungo ezi- mayelana nokuthi uzolandela imithetho kankulunkulu neyebandla i-apostolic Faith Mission angaphansi kwalo yize ubevele enelakhe lizimele.
“Njengamanje usuzoba ngaphansi kobuholi bebandla I-AFM, ugcine zonke izimfanelo,” kuphetha umfu Goliath.
Kube nenkulu inhlokomo ngesikhathi upastor Sister K eqeda ukwenza izifungo zakhe.
Unikwe ithuba lokukhuluma, waqala ngokubonga uyise, umnu Richard Makhaye, amchaze ngokuthi uyisimanga sikababa obe naye ezalwa, emeseka kukho konke akwenzayo kuze kube manje.
Ubuye wabonga ukwesekwa yibandla nokufika kwabaholi abebezomgcoba. Umfu Sister K wethembise ibandla ukuthi uzoyisebenzela inkosi, athembeke emsebenzini abizelwe wona.
Umfu Moses Mngadi, ongomunye wezikhulu zebandla I-AFM, unxuse ukuba amalunga ebandla abhukule asebenze kanzima ukuze kwakhiwe ngokushesha indlu yesonto.
Uthe akusiwo umsebenzi womfundisi ukufuna izimali, ngowebandla. Ithimba lendumiso belenza ezibukwayo ngomculo, umfana odlala i- keyboard, ukwenza Makhaye, ubesukumisa nesinedolo, kudunyiswa ongabonwayo. Umphathi wohlelo bekungumnu Muzi Ntombela .
IZITHOMBE NGU: KNOWLEDGE SIMELANE
ABACULI bendumiso bebandla I-AFM Church of Poda emlazi benza umsebenzi wabo ngamaphimbo. Kusukela kwesobunxele ngunkz Ntombifuthi Dlamini, wunkz Thulisile Mdontshwa, wunkz Londiwe Duma nonkz Slindile Nxumalo noKwenza Makhaye kwi-keyboard.